बोले कुलमान : मागे जनताको साथ – लोकल खबर अनलाईन
Posted by: Local Khabar in लेख-विचार, लोकल खबर, समाचार August 2, 2017	618 Comments 6,837 Views
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको गत मंगलबारको बैठकमा केही सांसदहरूले २५ मेगावाटको सोलार ग्रिड आयोजनाको टेन्डर प्रक्रियामा थोरै कबोल गर्ने कम्पनीलाई छाडेर धेरै कबोल गर्ने कम्पनीहरुलाई ठेक्का दिएर गम्भीर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाउदै उनीसहित पूर्व उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मामाथि अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेपछि उनले सेतोपाटी डिजिटल पत्रिकासँग गरेको कुराकानीको अंश सोही पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।
समाचारको शिर्षक भने हामीले परिवर्तन गरेका छौं । सांसदहरूले लगाएका आरोप बारे घिसिङले यहाँ बोलेको छन् । पाठक तथा आम नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुले २५ मेगावाटको सोलार ग्रिड आयोजनाको टेन्डर प्रक्रियामा के–के भएको हो ? यसबारे घिसिङका कुरा रुचीका साथ सुन्ने चाह राखेका अनुभूतिसहित यो कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो । जिम्मेवार र असल नागरिकले शिष्टताका निम्ति कृपर्या घिसिङका कुरा जति सकिन्छ शेयर गरिदिनका लागि पनि हामी अनुरोध गर्दछौं । –सम्पादक
हिजो मात्रै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरुले मलाई र पूर्व उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मामाथि अख्तियार मार्फत् छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएछ। उहाँहरुलाई अधिकार छ हामी माथि छानबिन गरे हुन्छ । हामीले राष्ट्रको हितका निम्ति नियमसंगत तरिकाले काम गरेका छौं, त्यो काममा उहाँहरुले छानबिन गर्दा केही फरक पर्दैन । तर समितिको बैठकमा उहाँहरुले हामीलाई पनि बोलाउनु पर्थ्यो, हाम्रा कुरा पनि सुन्नुपर्थ्यो । सुरुमा एकचोटीमा उहाँहरूले बोलाउनु भएको थियो तर निर्णय गर्ने बेला बोलाउनु भएन ।
चोरले सबैलाई चोरमात्र देख्छ भन्छन्, अहिले त्यस्तै भएको जस्तो लाग्छ। सबै जनामा आफूले जे गरेका छन्, सबैले त्यही गरिरहेका छन् भन्ने सोच छ । विश्वासको वातावरण छैन ।
पहिलो, चौथो नम्बरको कम्पनीलाई हामीले गलत नियतका साथ ठेक्का दिएका होइनौं, विश्व बैंकले दिन उपयुक्त ठानेकाले सो कम्पनीले ठेक्का पाएको हो। यो प्रक्रियाको सुरुवात २०१५ अप्रिलदेखि भएको हो। त्यतिबेला सोलार प्लान्ट राख्न विश्ब बैंकले ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने सम्झौता गरेको थियो। त्रिशुलीमा रहेको प्राधिकरणको सवस्टेशनको जग्गामा २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट राख्न टेन्डर आह्वान भयो ।
५१ कम्पनीले टेन्डर किनेकोमा १६ कम्पनीले टेण्डर हाले। टेन्डर हालेका कम्पनीको मूल्यांकन गर्दागर्दै तीन महिना बित्यो। तीन महिनामा टेन्डरको अवधि सकियो। प्राधिकरणले उनीहरुलाई तिमीहरुको अवधि सकियो अब अवधि बढाउनु पर्छ भन्दा ११ वटा कम्पनीले समय थपेनन् । किनकी उनीहरुले कबोल गरेको रकम धेरै थियो।
पिएमयूले पाँच वटा कम्पनीको कागजात हेरेर उनीहरुमध्ये कुनै पनि योग्य नभएको रिपोर्ट बुझायो। विदेशी विज्ञले उनीहरुको कागजातको थप अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिन भन्यो ।
विश्व बैंकको चिठीमा यस विषयमा नयाँ व्यवस्थापनको धारणा पनि माग गरिएको थिया हामीले धेरै चरण कुरा ग¥यौं । हामीले टेन्डर रद्द गर्छौं भन्यौं । उनीहरुले टेन्डर रद्द गर्ने कारण चाहिन्छ । टेन्डर रद्द गर्ने नै हो भने यो प्रोजेक्ट त बन्दैन नै हामी यो ऋण नै खारेज गर्छौं भने ।
दोस्रो कुरा, नो अब्जेक्सन दिँदा विश्व बैंकले पछिल्लो दुई वर्षमा विश्व बजारमा सोलार मोडुलको मूल्यमा १६.९ प्रतिशत कमी आएको छ । यो कुरा पनि समेटेर नेगोसियन गर्नु भनेको थियो । प्राधिकरणले ठेक्का पाउने कम्पनीसँग घटेको मूल्यमा काम गर्ने कि नगर्ने भनेर सोध्दा उनीहरुले कबोलभन्दा २७ करोड काम गर्न तयार रहेको जवाफ पठाए । विश्व बैंकले पनि त्यसलाई स्वीकृति दियो । त्यहीअनुसार गत जेठ ३ गते प्राधिकरणले त्यो कम्पनीसँग सम्झौता ग¥यो । उनीहरूले आउँदो पुस माघमा बिजुली उत्पादन गर्ने गरी काम गरिरहेका छन् ।
फेरि यो योजना त हाम्रो पैसाले बन्न लागेको होइन । विश्व बैंकको स्वीकृति बिना यसमा हामी एक कदम पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौं । हिजो पहिलो नम्बरलाई छोडेर दोस्रो नम्बरको लाई ठेक्का दिने निर्णय गर्ने पूर्वएमडीलाई हिरो बनाइएको छ ।
हामीले योजना अघि बढाउन विश्व बैंकसँग मिलेर काम गर्दा हामीमाथि छानबिन गर्ने रे ।
हिजोका दिनमा लोडसेडिङ हटाउन राज्यले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । गत वर्षमात्रै हामीले प्रति युनिट ३० रुपैयाँ पर्ने डिजेल प्लान्टका लागि टेन्डर आह्वान गरेका थियौं ।
यो वर्ष पनि हिउँदमा लोडसेडिङ अन्त्य त्यति सजिलो छैन । लोडसेडिङ अन्त्य गर्न केही महत्वकांक्षी योजनाका साथ अघि बढ्न खोज्दा सबैतिरबाट अवरोध भइरहेको छ ।
भारतबाट धेरै आयात पनि नगर, सोलार पनि नराख, एलइडी पनि नकिन तर हिउँदमा लोडसेडिङचाहिँ जसरी पनि अन्त्य गर भन्ने कुरा आयो ।
यो त कसरी सम्भव हुन्छ र ? हात खुट्टा बाँधेर राख्ने अनि काम पनि गर भन्दा अगाडि बढ्न सकिन्न । हामीले अघि सारेका योजनामा कुनै गलत मनसाय छैन । प्रक्रियागत रुपमा हेर्ने कुरा हेर्न सकिन्छ । नियतमा खराब छ भने त्यसलाई पनि छानबिन गर्न सकिन्छ गलत व्याख्या गरेर काममा अवरोध गर्न मिल्दैन ।
काम गर्न लागेको मान्छेलाई विश्वास त गरिदिनु प¥यो । जोखिम मोलेर निर्णय नलिएसम्म काम त हुँदैन । हामीले अहिले त्यस्तै जोखिम मोलेर निर्णय गरेका छौं ।
हामी देशभरि लोडसेडिङ हटाएर नेपाललाई उर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने योजनामा अघि बढेका छौं । तर हरेक हरेक पाइलामा अवरोध जारी छ । कहिलेकाहीँ लाग्छ, लोडसेङि हटाउने जिम्मेवारी मेरो टाउकोमा मात्र राखिएको छ । यो त सबैको जिम्मेवारी हो ।
अबरोध भए पनि मैले हिम्मत हारेको छैन । सबै उपाय लगाएर यो हिउँदमा देशभरि लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भनेर लागेका छौं । तर पहिला दलाली गर्नेहरु अहिले सलबलाएका छन्। लोडसेडिङ भयो भने सोलार, इन्भर्टर, जेनेरेटरको ब्यापार बढाउने उनीहरुको दाउ छ । त्यसैले उज्यालो अभियानमा एउटा कुलामानले मात्र केही गर्न सक्दैन यसमा सबैको सहयोग चाहिन्छ।
तस्वीर पनि सेतोपाटी डट कमबाट ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको गत मंगलबारको बैठकमा केही सांसदहरूले २५ मेगावाटको सोलार ग्रिड आयोजनाको टेन्डर प्रक्रियामा थोरै कबोल गर्ने कम्पनीलाई छाडेर धेरै कबोल गर्ने कम्पनीहरुलाई ठेक्का दिएर गम्भीर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाउदै उनीसहित पूर्व उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मामाथि अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेपछि उनले सेतोपाटी डिजिटल पत्रिकासँग गरेको कुराकानीको अंश सोही पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो । समाचारको शिर्षक भने हामीले परिवर्तन गरेका छौं । सांसदहरूले लगाएका आरोप बारे घिसिङले यहाँ बोलेको छन् । पाठक तथा आम नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुले २५ मेगावाटको सोलार ग्रिड&hellip;
Janardan Sharma Kulman Ghising Kulman Ghising news. Nepal electricity	2017-08-02
Tagged with: Janardan Sharma Kulman Ghising Kulman Ghising news. Nepal electricity
Previous: जेब्रा क्रसमा हिड्ने गाडि ! (तेज प्रकाश राई)
Next: हेर्नुहोस अनमोल केःशीको २१ वटा तस्वीरहरु (भिडियो)